Awasebenzi amakhamera emigwaqeni yaseGoli, kodwa akhona amaphoyisa | News24
Awasebenzi amakhamera emigwaqeni yaseGoli, kodwa akhona amaphoyisa
Durban - UMkhandlu wedolobha laseGoli uthi kulawa madonto amathathu azayo kuzokhishwa ithenda entsha yokufakwa kwamakhamera aqapha isivinini emgwaqeni.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi ubuholi obusha balo masipala obuphethwe yiqembu le-DA linqamule inkontileka nabaphaki bemisebenzi abahlanu ngoba bengafuni ukuqhubeka nezinkontileka ezagunyazwa yiqembu le-ANC.
I-Moneyweb ibika ukuthi izinkampani ezimisiwe ukusebenza kubalwa kuzo i-TMT Services, Syntell kanye ne-MVS Phumelelo, okuyizona ebezenza umsebenzi wokulawula lawa makhamera.
OLUNYE UDABA:Kuzofakwa amakhamera ehhostela elidume ngodlame
Kuthiwa leli dolobha belikhipha izinhlawulo ezilinganiselwa ku-500 000 ngenyanga, likoleka imali elinganiselwa ku-R30 million-R35 millionngenyanga ngamathikithi amakhamera. Kodwa kuthiwa leli nani selehle kakhulu njengoba kuqedwe lezi zinkontileka.
NgoLwesine uWayne Minnaar okhulumela umnyango wamaphoyisa omgwaqo kulo masipala uthe: "Kutshalwe amaphoyisa omgwaqo ezindaweni eziningi lapho bekusebenza khona amakhamera. Umkhandlu usakumisile ukusetshenziswa kwamakhamera okwamanje."